DLULA KLAX - I-Los Angeles Intl Airport Photoreal FSX & P3D - Rikoooo
KLAX - Los Angeles Intl Airport Photoreal FSX & P3D Inguqulo 3.0
Usayizi 18.8 MB
Play 42 494
Lesi sithombe sangempela se-Photo real sokwakhiwa kabusha okuphelele kwe FSX/P3D Isikhumulo sezindiza esizenzakalelayo se-KLAX sisebenzisa inguqulo yakamuva ye-ADE (v01.50), iGoogle SkecthUp 8, nethuluzi lokuklama indawo le-SBuilderX.
Lokhu KLAX nobuhle bendawo entsha, Version 3.0 kuhlanganisa izakhiwo ezintsha ukuphela eziye silungiswe futhi kabusha ukubheka enengqondo kakhudlwana. I wanezela izibani esibulalayo, (akukho izibani ebusuku ukukhanya okwamanje), izihlahla ezintsha, izimoto emagalaji yokupaka,
Izimoto emhlabathini taxiway ukusetshenziswa fixed, kanye neminye imininingwane eminingana nice ukukhulisa isipiliyoni KLAX.
Izincwajana zemininingwane imininingwane Kufakwe the New Tom Bradley International Terminal, izakhiwo isendaweni W.Cenury Blvd, 9 Airbus A380 yokupaka amabala, futhi Photo emhlabathini Real ukwakheka. I zezindiza kanye amaphinifa sezindiza kuqondaniswe ukufanisa sesathalayithi Google Amafoto & Yahoo.
Ukusethwa kwendawo enhle nokuzazisa kuyo FSX/P3D. Ukuze uye esikhumulweni sezindiza i-KLAX kufanele uthayiphe KLAX emkhakheni "ikhodi Airport" kumphathi wakho flight